यो सुचना राम्ररी पडीदिनु हुन अनुरोध छ।
1. हाम्रा शिक्षक मित्रहरुको अनुरोधमा अब यो Unit Test सके पछि मात्रै नयाँ group मा बच्चाहरुलाई register गरि राख्नेछौ। यो पहिलो unit test परिक्षा अवधी भर कुनै अप्ठ्यारो नहोस् भनेर अहिले पुरानै group मा हामिले unit test लिन गैरहेका छौं । अब आउने Ist Term exam लाई पनि कुनै प्रकारको बाधा नहोस्, भन्नाको लागि पनि पनि पुरानै group बाट Unit Test परीक्षा लिन गौरहेका हौं।
2. NTC को सस्तो सुलभ दरको data प्राप्त गर्न हामिले अभिभावकबर्गको फोन नम्वर NTC मा पठाइ सकेका छौं र approved भएर आइसकेको छ। अब सस्तो data अन्तर्गत "Happy Learning" को data package लिनको लागि *1441# मा type गरि महिनाको जम्मा Rs.315.00 मा 20+4 GB DATA प्राप्त गर्नुहोस् । अब wifi छैन, net आएन, बत्ती भएन आदि इत्यादीको झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस् ।
3. यदी कसैको नम्बर दिन छुटेको भए September5तारिख सम्ममा NTC को data नम्बर उपलब्ध गराउन सुजिता म्यामको mobile नम्बरमा फोन text गरि पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
4. यस बिद्यालयले Fuse machine classroom सङ्ग सम्झौता गरिसकेको छ, अब सो apps बाट पडाउन धेरै सजिलो र भरपर्दो पनि हुनेछ। प्रथम त्रैमासिक परिक्षा हुने बेला सम्म हामी यो fuse machine को app बाट सबै तयारी गरि सक्नेछौ।
5. बिद्यालय प्रशासनको अनुरोध स्वीकार्नु भै कृपया e-sewa मार्फत Principal अर्थात मेरो Official फोन नं 9851043489 मा राखी दिनु भएमा बैंक सम्म पनि जानू नपर्ने गरी online बाटै शुल्क बुझाउन भर पर्दो भएको हुनाले चाडै बुझाइदिनु भएमा अति आभारी हुनेछौं। अथवा बिद्यालयको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको Account no....01715336555 मा राखिदिनु हुन अनुरोध छ। तर हालको अवस्थामा सजिलो सङ्ग भरपर्दो भनेको e-sewa हो। शुल्क बुझाइसकेपछि confirmation भौचरको Foto खिचेर वा scan गरेर सुजिता म्यामको 9841865855 यहि नम्बरको viber मा राखिदिनु हुन अनुरोध छ। केही समस्या भए सुजिता म्यामलाई फोन गर्न हुन अनुरोध गर्दछु।